‘दंगल’ बन्यो विश्वमै धेरै कमाउने पाँचौं गैरअंग्रेजी फिल्म, ‘बाहुबली’ले सक्ला त भेट्न?
अगस्टमा हङकङमा रिलीज हुँदै
आमिर खानको फिल्म ‘दंगल’ले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। यो रेकर्ड तोड्न अब बलिउड फिल्मलाई धेरै नै मुस्किल पर्नेछ।
फोर्ब्सको रिपोर्टका अनुसार ‘दंगल’ अब विश्वमै सबैभन्दा धेरै कमाउने पाँचौं गैर अंग्रेजी फिल्म बनेको छ। हालसम्म फिल्मले ३०१ मिलियन डलर (करिब ३ हजार ९२ करोड रुपैयाँ) कमाएको छ।
सबैभन्दा धेरै कमाउने गैर अंग्रेजी फिल्मको हालको सूची यस्तो छः
१. द मर्मेड (चीन) – ५५३ मिलियन डलर (२०१६ मा रिलीज)
२. द इनटचएबल्स (फ्रान्स) – ४२७ मिलियन डलर (२०१२ मा रिलीज)
३. मोन्स्टर हन्ट (चीन) – ३८६ मिलियन डलर (२०१६ मा रिलीज)
४. योर नेम (जापान) – ३५४ मिलियन डलर (२०१७ मा रिलीज)
५. दंगल (भारत) – ३०१ मिलियन डलर (२०१६ मा रिलीज)
दंगल सन् २०१६ को डिसेम्बर २३ मा भारतमा र २०१७ मे ५ मा चीनमा रिलीज भएको हो। चीनमा यो फिल्मले अप्रत्यशित व्यापार गरेको हो। चीनमा रिलीज भएको १ महिना भइसक्दा पनि ७ हजारभन्दा बढी स्क्रिनमा यो अझै लागिरहेको छ।
दंगलले चीनमा पैसा मात्र हैन चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङसहित लाखौं फ्यान पाएको छ। राष्ट्रपति सिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको फोनवार्तामा आफूले दंगल हेरेको र मनपरेको बताएका थिए।
दंगलका साथै एस.एस. राजमौलीको ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ ले पनि विश्वव्यापीरुपमा बेतोड कमाइ गरेको छ। पहिले ‘बाहुबली २’ र पछि ‘दंगल’ भारु १५०० करोडभन्दा बढी कमाउने भारतीय फिल्म बनेका हुन्। तर अब, कमाइको मामिलामा ‘दंगल’ ले ‘बाहुबली २’ लाई धेरै पछाडि छाडिदिएको छ। ‘दंगल’ चाँडै भारु २००० करोड कमाउने क्लबमा समावेश हुँदैछ।
दंगलको कमाइको रफ्तार हेर्दा यो सबैभन्दा धेरै कमाउने गैर अंग्रेजी फिल्ममा जापानी फिल्म ‘योर नेम’लाई पछि पार्दै चौथो स्थानमा पर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
दंगल अब ३१अगस्टमा हङकङमा रिलीज हुने बताइएको छ। त्यहाँ यसले कस्तो कमाइ गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।
भारतीय रेसलर महावीर फोगट र उनका दुई छोरी गीता र बबिताको जीवनमा आधारित फिल्म दंगल नितेश तिवारीले निर्देशन गरेका हुन्। फिल्ममा आमिर खानले महावीर फोगटको भूमिका निभाएका छन् भने छोरीको भूमिकामा फतिमा सना शेख र सनाया मल्होत्रा छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार १, २०७४ ०३:५८:०१